Chimiro 3L U-bhaudhi Mechanical Tee
Vanachandagwinyira coupling 300Psi
Heavy basa Hazvichinji-chinji payakabatanidzwa 500Psi
Heavy basa Zvichienderana payakabatanidzwa 1000Psi
Heavy basa Zvichienderana payakabatanidzwa 500Psi
U bhaudhi Mechanical Tee
90 Dhonza Elbow
90 Kuderedza Gokora
Grooved Tee Std Nharaunda
Yakagadziriswa Kuderedza Tee
Grooved Kuderedza Muchinjikwa
Yakagadziriswa Kuderedza Muchinjikwa
Cap pamwe naCon. Hole
Grooved Pfupi Muchinjikwa
Heavy Duty Zvichienderana Couplin ...
● U-bhaudhi inotsiva chikamu chekuvhara, isina kuwina, zvakananga kubva kubazi repombi huru.
● Muviri unovandudzwa unopikisa kanokwana kana kumanikidza kushanda.
Iyo U-bhaudhi Mechanical Tee ndiyo yakanakira nzira yekubuditsa yakakodzera yekugadzira kwakanangana kwakananga kune inosasa misoro, kudonhedza minyatso uye kana gaji. Hapana kudikanwa kwekutema, ingocheka kana kuboora gomba pane yaunoda nzvimbo yekubuda. Isa chigaro-rega kuti kora yekuwana ikwane mukati megomba uye ichengetedzwe neU-bhaudhi nenzungu.Saddle-let inouya neyakajairwa nhema dema kana senzira inogona kupihwa electro zinc, yakafukidzwa kana kupendwa orenji. Chigaro-Ngatibvumire kuzara kwekuyerera nekumanikidza kusvika ku300 PSI (20 bhaa) Iyo nzira yekugadzirira pombi inoda kucheka kana kuchera kweiyo yakatarwa gomba saizi pane yepakati pombi. Nguva dzose shandisa saizi yakafanira saizi sezvakaratidzwa mutafura uye usamboshandisa torchi kucheka gomba. Mushure mekunge gomba ratemwa mativi ese akashata anofanira kubviswa uye nzvimbo iri mukati me5 / 8 ”(16mm) yegomba inofanira kuongororwa kuti ive nechokwadi chekuchena kwakatsetseka, isina chero kufemerwa kana fungidziro dzinogona kukanganisa kukosheswa kwakakodzera kwegasket
Mechiniki teki dzinoita kudzokedzana uye kugadzirisa zvakareruka nekuti zvinokuponesa dambudziko rekucheka kana kubvarura pombi yakawanda. Pamwe iwe unofanirwa kuisa mutsara webazi mutsva kuti ubve panosasa moto. Kana iwe uchida iro bazi padhuze nekuguma kwekumhanya kwepombi, kugadzirisa mashoma akarovera akabatanidza uye kuwedzera yakajairwa tee inofanirwa kuve nyore zvakakwana. Asi kana bazi richida kubva pachikamu chepakati chenetiweki, unogona kuwana pombi yakawanda yekucheka nekufamba. Uye kana iwe watengesa, wakasunga, kana rumwe rudzi rwekubatana panzvimbo pegirivhi, unogona kushandisa nguva yakawanda nezvinhu zvekukatanura nekusanganisazve mitsara yako yekusasa.
Rinoshanda • Inopa yakanangana nebazi kubatana pane chero nzvimbo gomba rinogona kutemwa mupombi. Inowanikwa Yekupedzisira Yekubatira Kugadziridza • Victaulic® Original Groove System (OGS) • Victaulic® StrengThin ™ 100 Groove system (ST-100) • Mukadzi National Pipe Thread (FNPT) • Mukadzi weBritish Standard Pipe Parallel Thread (BSPP) • Mukadzi weBritish Standard Pipe Taper. Thread (BSPT) Kunyorera ZVINOTAURA • Hazvibvumirane nekushandisa paPVC plastiki pombi. • Inofanirwa kuiswa kuitira kuti kubatana kukuru nebazi kuve kwechokwadi 90 ° kona. • Haibvumidzwe kuti ishandiswe mune zvinopisa tapping application. • Inogona kupihwa nesimbi isina tsvina dzimba dzepasi
Pashure: Yakagadziriswa Kuderedza Muchinjikwa
Zvadaro: 90 Kuderedza Gokora